Fankalazana ny fetim-pirenena Matso hafakely
Pasipaoro diplaomatika Natokana ho an'ireo olom-panjakana ambony ihany
Araka ny fanapahan-kevitra navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) lah° 16-HCC / D3, tamin'ny 05 septambra 2019, mametra ny fitsipika anatiny ifampifehezan’ny Antenimieram-pirenena, voatsiahy ao amin’ny fanapahan-kevitra navoakan’izy ireo lah° 07-HCC / D3, tamin'ny
Fitandroana ny filaminana tamin’ny Papa nandalo Nahomby, hoy ny tafika
Nanao tomban’ezaka nandritry ny fitandroana ny filaminana tamin’ny fandalovan’ny Papa Fransoa teto Madagasikara tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava omaly ny avy eo anivon’ny tafika Malagasy tamin’ny alalan’ny Emmonat ary notronin’ny avy eo
Nankalaza ny fetin`ny fahaleovantena isika omaly alarobia 26 jona. Hafakely ny tamin`ity fa tsy tahaka ny isan-taona. Misy zavatra hita anefa toa misisika moramora eny an-tsefatsefany eny.
Tamin`ny roa ora tolakandro ny matso teo Mahamasina. Raha ny nahazatra dia ireo miaramila mandeha an-tongotra no tena nampiavaka ny matso lehibe rehefa fankalazana fetim-pirenena. Tamin`ity, ireo mandeha amin`ny fiara no tena misongadina. Fiara tsy mataho-dalana ny ankamaroany sady vaovao avy amin`ny fitondram-panjakana satria natao ho vaindohan-draharaha ny famerenana ny tsy fandriampahalemana eto amin`ny tany sy ny firenena. Naompana kokoa amin`ny ady amin`ny tsy fisian`ny fandriampahalemana ny matso omaly. Ireo fiara mifono vy natolotry ny filoha Rajoelina ho an`ny mpitandro filaminana no nandravaka ny matso. 2900 no mpandray anjara ka 2 000 mahery ireo mpandeha an-tongotra izay nahitana tafika avy amin`ireo firenena namana aty amin`ny ranomasimbe indianina : tafika frantsay avy amin`ny FAZSOI (Forces Armees de la Zone Sud de l`Ocean Indien) La Reunion, ny avy amin`ny firenena Maorisianina ary ny tafika Kaomorianina. Teo koa ireo fitaovana vaovao azon`ny Foloalindahy Malagasy nahitana angidimby 4, CSNA 5 ary fiaraminidina mpitatitra CASA 1. Manaraka izay, na teo amin`ny fanamiana sy ny firindran`ny matso dia nampiseho endrika fahavononana tanteraka amin`ny fampandriana tanteraka ny filaminana ny Foloalindahy amin`ny alalan`ny dia nohafainganina ny isany. Raha 90 dia isa-minitra hatramin`izay ny fanaovana matso dia natao 100 tamin`ity. Teo ihany koa ny fampisehoan`ny Tafika Malagasy fa raha tao anatin`ny fotoana maro, tsy nanana raoplanina dia nampiseho ny Tafika Malagasy, indrindra ny avy amin`ny RFI Malagasy tamin`ny alalan`ny fitsambikinan`ireo mpilatsaka elonaina miaraka ny sainam-pirenena teto amin`ny kianjan`i Mahamasina. Fa anisan`ny nampiavaka an`ity matso ity ny fandraisan`ny filoha Rajoelina fitenenana mialoha ny fisafoana andian-tafika. Tian`ny filoham-pirenena naseho ampahibemaso amin`ny vahoaka Malagasy fa vonona tanteraka ny Foloalindahy sy ny Tafika Malagasy hanatanteraka ny iraka izay famerenana ny fandriampahalemana. Ny azo ambara dia hain`ny mpitondra tokoa ny serasera ary tena tsapa izany, saingy efa manomboka hain`ny mpanara-baovao koa anefa ny amin`izay. Ny vahiny nasain`ny filoha Rajoelina manokana nanatrika ny lanonana ny filoham-pirenena Rwandais, Paul kagame. “Malagasy aho. Tia fandrosoana. Tia ny tanindrazako”… io no lohahevitra nenti-mankalaza ny fetin`ny fahaleovantena.
Tsikaritra fa niova ny toeran`ireo mpanatrika ny matso teo amin`ny “tribune centrale”: ny filoham-pirenena roa tonta sy ireo vahiny nasaina indray no taty ambany saingy ireo ireo miaramila manamboninahitra no eny ambony. Marihina fa ny fandaminana avy amin`ny Fiadidiana ny Repoblika dia tsy misy idirany amin`ny fandaminana nataon`ny Tafika Malagasy.